China hands over food to flood-affected Zimbabwe - China.org.cn
China hands over food to flood-affected Zimbabwe
The Chinese Embassy in Zimbabwe on April 20, 2017 handed over 60,000 U.S. dollars worth of basic food to assist hundreds of local families affected by floods that hit the southern parts of the country in February.
The Chinese Embassy in Zimbabwe on April 20, 2017 handed over 60,000 U.S. dollars worth of basic food to assist hundreds of local families affected by floods that hit the southern parts of the country in February. In the picture, Chinese Ambassador to Zimbabwe Huang Ping (second from left) speaks at the handover ceremony. [Photo by Zhang Yuliang/Xinhua] Of the donation, the Chinese Red Cross Society contributed 50,000 dollars while the Chinese Embassy and the Chinese community in Zimbabwe chipped in with 10,000 dollars.
The Chinese Embassy in Zimbabwe on April 20 handed over US$60,000 worth of basic food to assist hundreds of local families affected by floods that hit the southern parts of the country in February.